မှတ်ချက်များ Keep ည့်သည်များသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရှုစေခြင်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 6, 2007 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 25, 2014 Douglas Karr
သူတို့ကမင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ သူတို့လာတဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တယ်။ အခြားမည်သည့်အရာကမျှသူတို့ကိုစိတ်မဝင်စားပါ။ သင့်တွင်စာဖတ်သူမည်သူမဆိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေးသားချက်များရှိကြောင်းသင်သိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို 'ဖြတ်သန်းသွားသော' အသစ်သောစာဖတ်သူများအားသင်မည်သို့ပြနိုင်မည်နည်း။
ဒီနေ့ငါထူးဆန်းတဲ့အသွားအလာတယ်။ ငါက Mac ပါ၊ ကွန်ပျူတာပါ ၏ရှေ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရတယ် Netscape က တစ်ခုတည်းသောရင်းမြစ်မှ hits ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအပေါ် posted တယ် Furl, StumbleUpon, Redditနှင့် Del.icio.us။ နက်ဖြန်နေ့၌သင့်အား stats အပြည့်နှင့် WordPress ၏ကြီးမားသောပမာဏကိုအစေခံနိုင်စွမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတစ်ခုပေးပါမည်။ ဒီမှာငါ့အမှတ်သော်လည်း, ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုသည်။
၎င်းသည်အလွန်များပြားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး site overlay ကိုအမှန်တကယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာမှဖောက်သည်များမည်သည့်နေရာသို့သွားနေသည်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့သည်။ site overlay report သည်ကလစ်နှိပ်ခြင်းရာခိုင်နှုန်းများ၏အမြင်အာရုံကိုညွှန်ပြရန်ကလစ်နှိပ်ခြင်းအားသင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ပထဝီအနေအထားအလိုက်ခွဲထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ sidebar ရှိကျွန်ုပ်၏မကြာသေးမီကမှတ်ချက်များကို ဗဟိုပြု၍ ကလစ်နှိပ်ခြင်းများကိုချက်ချင်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာသို့လာရောက်လည်ပတ်သော ၃၅% သောလူများသည်စာမျက်နှာမှထွက်ခွာသွားကြလိမ့်မည်။ သို့သော်အံ့ ing စရာကောင်းလောက်အောင် ၅၂.၃% သည်aကိုနှိပ်သည် လတ်တလောမှတ်ချက် ငါ့ဘေးမှာ ဝိုး!
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နောက်ထပ် 10% မှတ်ချက်အပေါ်ကိုနှိပ် - မှတဆင့်ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်မှာလင့်ခ်။ ဒါအံ့သြစရာပဲ! ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသကဲ့သို့၊ visitors ည့်သည်များသည်ကျွန်ုပ်၏ site တွင်မည်သည့်အရာသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းကြည့်ရှုရန်အခြားသူများ၏မှတ်ချက်များကိုအမှီပြုကြသည်။
အလုပ်မှသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Randy ကသူသည်ဘလော့တွင်မှတ်ချက် ၁ ခုထက်ပိုသောရေးသားချက်များကိုသာဖတ်ကြောင်းပြောပြသည်။ ငါကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးမှတ်ချက်အရေအတွက်ကိုပြသဖို့အဲဒီဆောင်ပုဒ်ကိုပြုပြင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်းထိုပြောင်းလဲမှုများ၏အမှန်တကယ်သက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှတိုင်းတာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
ပို့စ်တစ်ခုစီတွင်မှတ်ချက်မည်မျှရှိကြောင်းပြသခြင်းအပြင်မှတ်ချက်များမည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သက်သေပြနိုင်ပြီဟုယနေ့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်ပိုမိုသောအလုပ်များလုပ်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်…၎င်းတို့အပေါ်မှတ်ချက်များအများဆုံးပါသောစာမူစာရင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာလူမှုမီဒီယာအားလုံးအကြောင်းကိုကြောင်းပြသသွားတယ် စကားပြောဆိုမှု
။ ခေါင်းစဉ်ကောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးကောင်းမွန်စွာရေးသားခြင်းသည်ညီမျှခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လူများသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာသတ္တဝါများဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်: ငါခမညျးတျောရော့ Marsh ၏ပြေးပါတယ် Recent Comments ပလပ်ဂင်။ အဲ့ဒါမှန်တယ်။ အဖေရော့ကရိုမန်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်တယ်။ အထက်ပါမှပလပ်အင်၏စွမ်းအားသည်မည်သည့်သြဇာသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံပါ၊ သို့သော်ယုံကြည်ခြင်းအနည်းငယ်ကိုထိခိုက်နာကျင်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုဖခင်ရော့
Tags: blog မှတ်ချက်များမှတ်ချက်မှတ်ချက်များအသုံးပြုသူထုတ်ပေးအကြောင်းအရာ
7:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 24
မှန်ပါသည်၊ အခြားသူများ၏မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းကဆွေးနွေးမှုပါဝင်သည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
7:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 3, 39
ငါသဘောတူတယ်။ ဒီဟာကိုကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်မှတ်တမ်းများတွင်လည်းသတိပြုမိပါတယ် မှတ်ချက်များကိုပိုမိုထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းကိုထပ်မံပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ညနေခင်းတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။